Usoro dum nke ime ntu uzo
Kedu otu esi eji gel gel eme ihe maka ogologo ntu? 1. Ghichaa ma hichaa ntu ahụ ogologo na mkpanaka ájá, wee jiri mmiri mmiri PH iji wepụ mmanụ griiz ahụ, ma tinye akwa mpempe akwụkwọ. Nwere ike ịjụ, gịnị kpatara na ịchọrọ iji mmiri mmiri edozi? Onu ogugu bu ...
Kedu ihe dị iche na ntu gel na ntu ntu?
site ha na 21-07-14
Kedu ihe dị iche na ntu gel na ntu ntu? Naillọ ọrụ ntu a na-aga n’ihu na-etolite, a na-emelitekwa ngwaahịa ntu. Yabụ anyị ga-ahụ ụdị dị iche iche nke ntu gel na ntu ntu, mana maka ọtụtụ ndị hụrụ ntu n'anya, ha aghọtabeghị ...
Isi ihe na-efu gel na elu gel ntu
Ihe dị iche na mkpuchi isi na akwa nke ntu ntu bụ: ọrụ dị iche iche, usoro ojiji dị iche iche, na ụzọ eji eme ihe dị iche iche. Otu, ọrụ dị iche iche 1. Ntu nka isi kootu gel bụ mmetụta mgbanwe. Tumadi iji chebe mbọ na-anọrọ mbọ gel Polish si eros ...
Ziri ezi ụzọ iji dọta nwamba anya jel ntu Polish na ndọta
Gịnị bụ nwamba anya mbọ gel Polish？ Nwamba ntu ntu, dị ka aha ya na-egosi, emere ka anya anya pusi. Ọ nwere ike igosi ìhè na onyinyo dị iche iche n'okpuru mgbanwe nke ọkụ, ọ dịkwa ka opal na aka iji dọta uche. 1. Mgbe ị na-eji pusi anya gel nail polish, ọ kachasị mma ị ...
You meela ụzọ ziri ezi iji chekwaa gel ntu?
Enwere ike ịchekwa gel gel polish n'ogologo oge, na ndụ ndụ dị afọ atọ ruo afọ ise mgbe emegheghị ya. Mana ekwesiri idobe ya mgbe emechara ya. Nchebe na-ezighi ezi ga-ebelata ọrụ ndụ nke mbọ mbọ. Cheedị ma ọ bụrụ na e nwere nnukwu karama nke ntu ...
Kedu ka esi ewepu ntu?
Kedu otu esi ewepu ntu? Kedu otu esi ewepu ntu ntu na mbọ aka? Aha ọzọ maka mbọ ntu bụ lacquer lacquer, nke bụ ụdị agba nke nwere ike tinye ya na mbọ iji mee ka mbọ ahụ maa mma ma maa mma. Ọrụ nke mbọ mbọ bụ otu ihe ahụ nke ntu oi ...
Ntu Polish zuru ezu nkà na ọgwụgwọ
Kedụ ka ntu ntu nwere akụrụngwa? Azịza: ọ dịghị ahịhịa iji wepụ ájá mgbe osise, na a ga-emepụta ahụ ma ọ bụrụ na ájá adịghị kpamkpam wepụ. Correctzọ ziri ezi: Mgbe ị na-atụcha ma na-egweri, jiri ahịhịa wepụ ájá n'elu. B: Ngwa ọsọ dị oke ọsọ, ọ ...
Nzọụkwụ nke pusi anya ntu
Igosi Nzọụkwụ nke pusi anya mbọ aka n'okpuru maka gị: Anya nkịta anya nkịta bụ ngwaahịa akụrụngwa nke ntu. A na-etinye ntụ ntụ magnet na gel anya nwamba, nke nwere ike ịmepụta mmetụta ọkụ ọkụ mgbe ìhè gosipụtara, nke yiri opal. Nzọụkwụ nke pusi anya ntu anya: ...
Kedu usoro usoro ziri ezi maka ntu ntu?
Mgbanwe Buru ụzọ jiri ọkọlọtọ faịlị ka ịkpụcha mbọ ahụ n’ụdị e mebere, wee lezienụ anya na mbọ aka iji wepụ ma hichaa irighiri mkpịsị aka na faịlị nwere iji gbochie mbọ mbọ ahụ ịrapara na mpekere mkpịsị aka ma mee ka ntu ahụ n'ọnụ ngwa ngwa bilie wee dapụ. ...
Kedu ihe dị mkpa ịzụta maka nka ntu?
Ọtụtụ ndị enyi abanyela ebe a na-etinye ntu n'ụlọ ntu oge ole na ole, ha niile nwere echiche nke ịme ntu n'ụlọ. Ya mere, gini ka ichoro iji mee ntu onwe gi? Ngwaọrụ dị mkpa ka a zụta kewara ụzọ abụọ ebe a, ka anyị leba anya na ngwa ọrụ ịkwesịrị ịzụta maka mbọ. ...
Ihe dị iche na ntu gel na ntu ntu
Naa, ntu ntu na-abụkarị ngwaahịa phototherapy. Nwere gel polish gel, ndochi gel, eserese gel, apịrị apịtị, wdg. Igwe igwe ọgwụgwọ ga-akpọnwụ. Igwe Phototherapy Igwe gel ntu na ntu ntu na ụdị phototherapy abụghị otu. Ihe e kwuru na mbụ n ...
Gel Nail ihe omuma
Ntu gel polish adịghị emerụ ahụ ahụ, yabụ ị nwere ike iji ya jiri obi ike. Ntu osisi Polish dị iche na mmanụ ntu dị na nke na ọ naghị agbanwe agbanwe ma ọ ga-etolite ihe nkiri yiri plastik n'okpuru ụzarị ultraviolet. Ihe ndi ozo eji eme ntu bu ihe ntanye, ihe ntaneti, na ihe ndi ozo ...
Ewute jel Polish